Ra’iisul wasaare Rooble oo beesha caalamka kala hadlay arrimaha doorashooyinka. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul wasaare Rooble oo beesha caalamka kala hadlay arrimaha doorashooyinka.
Ra’iisul wasaare Rooble oo beesha caalamka kala hadlay arrimaha doorashooyinka.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddoomiyey shir looga hadlayey habsami-u-socodka hannaanka doorashooyinka iyo dhameystirka dib-u-eegista dastuurka.
Shirka ayaa lagu boggaadiyey heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray hannaanka doorashooyinka iyo sida ay uga go’an tahay dowladda Federaalka ah fulinta qodobadii kasoo baxay shirkii Madaxda DFS iyo Dowladaha xubnaha ka ah ee lagu heshiiyey in dalka ay ka dhacaan doorashooyin ku qabsooma waqtigooda.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa shirka kusoo bandhigay sida ay uga go’an tahay Xukuumaddiisa fulinta qodobadii lagu heshiiyey ee ahaa in dalkan ay ka dhacdo doorasho xasilloon, isla markaana ay si caadi ah u socon doonaan howlaha dowladda xiliyada doorashada.
Mudane Rooble ayaa xusay in laamaha amniga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada ay u diyaarsan yihiin dardargelinta fulinta qorshaha amniga codbixiyeyaasha, musharixiinta iyo maamuleyaasha doorashooyinka ee ku sugan goobaha codbixintu ka dhacayso.
Previous articleHorjooge ka tirsan Al-Shabaab iyo darawalkiisa oo maanta la xukumay.
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble “Shacabka Muqdisho ma astaahilaan culeyskii ay kala kulmeen muddadii ay waddooyinku xirnaayeen”